About Us – Excellentiam
There is enormous scope in rendering dependable professional services to the cross border medical tourists in India and there are not too many organized Medical Tourism companies which can guide or facilitate them to reach the hospital and medical centres of their choice and get trouble free treatment.Excellentiam was constituted with the noble thought of serving ailing patients travelling with family from foreign countries to get treated and cured at private Hospitals and medical centres mostly in Chennai, Vellore, Bangalore, Hyderabad, New Delhi, Jalandhar, Ludhiana and Kolkata. A dedicated team of tour management professionals in Kolkata-India gathered together to the form of Excellentiam, primarillyaMedical Tourism company catering to the people of India’s negibouring countries. The company was registered in the year 2013 of Bangladesh. Excellentiam is ready with its facilities to assist Bangladeshi nationals from Country Operation office centrally located in Dhaka, Bangladesh. The office is run byadedicated team of executives who can be reached 24×7 through, emails, telephone, mobile phone, social media etc. Excellentiam has chalked out their immediate plans to expand the operation network progressively into other countries like Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka & Myanmar and work is going on in full swing to start and stabilize full-fledged operation latest by year 2018.
Excellentiam team comprises of expert team Medical Tour organizers and Logistic personnel. With us you can planacomplete Medical tour to any Indian Tourist Hubs which generally comprises of series seamless activities and avail our individualized professional services to get cured at the right place in India for any specialized surgical and non-surgical treatment.
We are particular about protecting our patients from all sorts of inappropriate channels and unwanted surgical treatments or hospitalization.
Excellentiamcan also make arrangement for you to get treated in the best of India’s traditional Ayurvedic stream of medicines or alternative medicines through yoga, meditation or naturopathy.
Our service personnel will speak to the concerned persons to understand possible extend of Healthcare tour and advise accordingly to reach the right alternatives of doctors and the hospitals.
We take complete care of our tourists and deriveacost effective Travel package for medication with the combination of tourism. Our services include travel, transfers, hotel accommodation, treatment and post-operative leisure trips around the city etc.
It is important for all of us to understand the need to get medically checked afteracertain stage of life. Excellentiam will continue their endevour to educate people the value of regular Health Check Up rather than the last hour emergency treatment. The company’s primary objective is to help the ailing persons to get quality and timely Hospitality, Health & Travel services at an affordable cost. Simultaneously, Excellentiam is formalizing operation setup for organizing medical tours for the unwell people of the sub continent to Singapore, Malaysia, Thailand & Taiwan – the other South East Asian healthcare hubs and even to UK and the US by the year 2021.
Excellentiam sets its goal to becomeapremier Medical Tourism Company in India and extend best of combined services of healthcare and touristry to atleast 1500 families across the border every month for next3years.
বিবেচনার মূল কারণ?
মূল বিষয়গুলি বিবেচনা করবে Excellentiam এর বিশেষজ্ঞ দল যা মেডিকেল ট্যুর আয়োজক এবং লজিস্টিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত।
আমাদের সাথে আপনি কোনো ভারতীয় চিকিৎসা পর্যটন হাবের ধারাবাহিক কার্যক্রম গঠন থেকে সম্পূর্ণ চিকিৎসা সফর পরিকল্পনা করতে পারেন। আমাদের আন্তরিক ও পেশাদারী পরিষেবা যে কোনো বিশেষ অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসার জন্য ভারতে সঠিক স্থানে নিরাময় পাওার উপযুক্ত সংগঠন।
আমরা অনুপযুক্ত চ্যানেল ও অবাঞ্ছিত অস্ত্রোপচার চিকিৎসা বা হাসপাতালের সব বিশৃঙ্খলতা থেকে আমাদের রোগীদের রক্ষা করার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে থাকি।
আপনি যোগব্যায়াম, ধ্যান বা প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ-চিকিৎসা মাধ্যমে ওষুধ বা বিকল্প ওষুধদ্বারা ভারতের ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক স্ট্রিমে সেরা চিকিৎসা পাওয়ার জন্য Excellentiam -এ যোগাযোগ করতে পারেন।
আমাদের সেবা কর্মিবৃন্দ স্বাস্থ্যপরিসেবার বিস্তারিত আলোচনার পর তদনুসারে, ডাক্তার এবং হাসপাতালের পরামর্শ দেবেন আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবে।
আমরা আমাদের পর্যটকদের সম্পূর্ণ যত্ন নিতে এবং পর্যটন সমন্বয়ে একটি সাশ্রয়ী ভ্রমণ প্যাকেজ যা ভ্রমণ, স্থানান্তর, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা এবং শহরের চারপাশে পোস্ট অপারেটিভ অবসর ভ্রমণের সমস্ত দায়িত্ব ণেয়।
এটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সব জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পরে মেডিক্যাল চেকআপ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হযা। Excellentiam তাদের এই পরিসেবা চালিয়ে মানুষকে নিয়মিত স্বাস্থ্যমান উন্নত রাখতে শিক্ষিত করে তুলতে চায়ে। কোম্পানির প্রাথমিক উদ্দেশ্য একটা সাশ্রয়ী খরচে মানের এবং সময়মত হস্পিট্যালিটি, স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ সেবা পেতে অসুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা।
Excellentiam বছর ২০২১ এর মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্যসেবা হাব এবং এমনকি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও তাইওয়ান থেকে উপ মহাদেশের অসুস্থ মানুষের জন্য চিকিৎসা ট্যুর আয়োজন করবে।
পরবর্তী ৩ বছরে Excellentiam ভারতে এক প্রধান চিকিৎসা পর্যটন কোম্পানির হয়ে প্রতি মাসে সীমান্ত জুড়ে অন্তত ১৫০০ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এবং ভ্রমন সম্মিলিত পরিষেবার জন্য তার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
Excellentian ဟာဆိုရင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ India ရဲ့ နယ်စည်းမခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုရပ်ဝန်းမှာ အရှိန်အဟုန် အကောင်းဆုံးနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ် ပါတယ်။ India ရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ အသင်းအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ များစွာမရှိလှပါဘူ။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ Excellentian ဟာဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Excellentian ဟာ ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ ကုသမှုခံယူ လိုသူတွေကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာနဲ့ ထိရောက်တဲ့ ကုသမှုတွေရနိုင်တဲ့ ဆေးရုံးတွေ ဆရာဝန် တွေဆီကို လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူတွေရဲ့ ရွေးချယ်လိုတဲ့ ဆေးရုံတွေ၊ ဆရာဝန်တွေဆီကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ရောက်ရှိနိုင်အောင် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါ တယ်။
Excellentian ဟာ ရောဂါခံစားနေရသူနဲ့ မိသားစုတွေကို ရေခြားမြေခြား၊ နိုင်ငံခြားလင့်ကစား၊ ဂရုစိုက်မှု၊ ကုသမှုနဲ့ ခရီးသွားမှုတွေကို ၀န်ဆောင်မှုပေးဖို့ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခံထား ရတဲ့ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် Chennai, Vellore, Bangalore, Hyderabard, New Dehli, Jalendhar, Ludhiana, Kolkata စတဲ့မြို့တွေမှာ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Excellentian ဟာ အိန္ဒယရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့ ပထမဦးဆုံး ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Kolkata – India ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု program တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Excellentian ကို 2013 မှာ Bangaladesh မှာ ပထမဦးဆုံး မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာ Bangaladesh နိုင်ငံ Dhaka မှာ ရှိတဲ့ Country Operation Office ကနေပြီး Bangaladesh နဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ကူညီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ် နေပါတယ်။Excellentian ရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွေဆီကို နေ့ညမရွေး Email, Line Phone, Mobile Phone, Social Media တို့မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Excellentian ဟာ စတင်တာလွတ်ချိန်မှာပဲ အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ မြန်မာ၊ အာဖကန်နစ္စတန်၊ ဘူတန်၊ သီရိလင်္ကာ စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း တိုးတက်မှုတွေကို ရရှိလိုတဲ့အတွက် Excellentian ရဲ့ သတင်းကောင်းတွေကို ပါးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရှိန်အဟုန်ကောင်းမွန်စွာနဲ့ စတင်နေတဲ့ Excellentian ဟာ အထက်က ဖော်ပြပါနိုင်ငံတွေမှာ 2018 ခုမှာ တည်ငြိမ်အောင်မြင်စွာနဲ့ အမွှေးအတောင်စုံနေမှာတော့ အသေအခြာပါပဲ။
Excellentian အဖွဲ့မှာ ထူးချွန်တတ်ကျွမ်းတဲ့ Medical Tour Organizer တွေနဲ့ ထောက်ပံ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ သင်တို့ရဲ့ ဖြစ်လိုတဲ့ဆန္ဒအတိုင်း India မှာ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း၊ India ရဲ့ အခရာကျလှတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နေရာတွေကို သွားရောက်နိုင်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချပြီး သင်တို့ရဲ့ ရောဂါအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှု ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးကုသမှုတွေနဲ့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့နေရာ တွေမှာ ကုသအမြစ်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ သင်တို့ကို တစ်ဦးချင်းအလိုက် အထူးဂရုစိုက်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေနဲ့ ဆေးရုံတက်ရောက်မှုတွေ မသင့်လျော်၊ မလျော်ညီတဲ့ ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကိုပါ ကာကွယ်မှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Excellentian ဟာ ဆေးကုသမှုခံယူမဲ့ ခရီးသွားတွေကို India ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ ကုသလို့ရအောင်လည်း စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။ ဥပမာ - AYU RVEDA STEAM ဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေနဲ့ အခြားသော သမားရိုးကျမဟုတ်သော ယောဂကျင့်စဉ်တွေနဲ့ တရားထိုင်ခြင်းတွေ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Excellentian ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးအလေးထားရတဲ့ ခရီးသွားတွေကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှု ခရီးသွားခြင်းတွေနဲ့ အခြားသော ကောင်းမွန်လှသော နေရာများမှ ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးရုံးတွေကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးဖို့ကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရီးသွားတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ထိုက်တန်မှုရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အပြည့်အ၀တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးရာမှ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ခရီးသွားခြင်းအပြင် အခြားသော ခရီးသွားခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်း အပြည့်အ၀၀န်ဆောင်ဂရုစိုက်မှု ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု များမှာ ခရီးသွားခြင်း၊ ပြောင်းခြင်း၊ ကူးခြင်း၊ လွဲပြောင်းခြင်း၊ နေရာစရာ နေရာများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ကုသမှုပေးခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ဂရုစိုက်မှုပေးခြင်းနဲ့ နားနားနေနေ အနားယူရန် နေရာအနှံ့သို့ ခရီးသွားတို့ကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။